Sawir laga qaaday Xasan Xanafi oo la soo bandhigay iyo Kenya oo baareysa sida uu ku helay dhalashada dalkaas
Iyadoo dhowaan dowlada Somalia ay shaaca ka qaaday in weriye Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsan Al-shabaab lagu qabtay gudaha dalka Kenya ayaa waxaa markii horeysay la soo bandhigay sawir laga soo qaaday.
Sawirka ayaa waxaa ka muuqda xasan oo wejiga uu kaga yaalo dhaawac bogsaday oo ka soo gaaray dagaaladii dhexmaray ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa dowlada Somalia oo taageero ka helaya AMISOM, waxaana sidoo kale la sheegayaa iney jiraan dhaawacyo kaga yaala qeybaha kale ee jirkiisa.
Dowlada Somalia ayaa sheegtay iney sirdoonkeeda uu fududeeyey sidii ciidamada Kenya ay u qaban lahaayeen Xasan Xanafi, iyadoo xustay in dhowaan loo soo gacan gelin doono lana soo taagayo maxkamad milateri si loo looga gooyo baa la yiri dembiyo la xiriira dilal loo geystay weriyeyaal Soomaaliyeed oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey.
Dhinaca kale, Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay baareyso qaabka uu Xasan Xanafi oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab uu ku helay dhalashada wadanka Kenya kadib markii laga helay aqoonsiga Muwaadinimada dalkaas.
Saraakiil dowladda Kenya ka mid ah oo diiday in Magaacooda Warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in Aqoonsiga laga helay Xasan Xanafi uu ku qoran yahay Magaca Yuusuf Xasan laakiin sawirka saaran uu shabaho Xanafi, waxayna sidoo kale saraakiishu sheegeen in aqoonsiga ay ku qoran tahay in Mr. Xanafi uu ku dhshay Magaalada Mandera.
Taliyaha Ciidamada Boliiska dalka Kenya David Kimaiyo oo Warbaahinta ay wax ka waydiisay qaabka uu Xasan Xanafi ku helay dhalashada wadanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in xilligan uusan arinkaasi ka hadlayn laakiin baaritaan ay.